S.N.M, intii ka soo hadhay- Maxay ku doorsadeen Somaliland-tii ay usoo halgameen. Caqliga ma gashaa inay wada carab beelaan mar qudha ! | ToggaHerer
← Faallo: Taariikhda Iyo Dhibaatada Somaliweyn Ku Hayso Somalida Xorta…
Soomaalidu waa Dad dhaqan oo Dabar go’aaya Q2 →
Hadda umaddu way la jeceshahay in ay daryeel, wuxuu doonaba ha ahaadee, ay helaan dadkii qarankan u soo dagaalamay. Waxayse ahayd xalaal iftiin baa la qashaa eh, in sharciga la mariyo, oo aan si suuq madow ah, kolba inta qof-qof, ama kooxo la idiinku yeedho, wax la idiinku qarin. Maxaa qarinta keenay? Hadaad runta sheegtaan, intii yarayd baa idinka joogsan, Somaliland way idinkala hanwayn tahay, mana aha waxii aad naftiina u soo hurteen, waar ma gaydaan. Istaaqfurulaysta oo isha kubadda ha ka qaadina. Sidaasaad haybad ku leedihiin. Xalaashada gunadan yar ee kalida iyo qarsoodiga la idiinku qoray, si aydaan kaalintiina aad ku leedihiin qarankiiana u banaynin. (nin lagu seedow ha seexan). Malafsiga ha baranina. Ceeb!